Maria vakansy any Alaotra - Editions Jeunes Malgaches
Maria dia zazavavy kely nanana fahazazana tsy dia mitovy loatra amin’ny ankizy rehetra. Tsy mba niara-nipetraka tamin’ny ray aman-dreniny izy fony fahakeliny satria voatery nandrato fianarana taty Antananarivo. Rehefa vakansy izy dia mody any amin’ny ray aman-dreniny any Alaotra. Mahafinaritra be tsy misy ohatra izany ny fialantsasatra ka vetivety foana dia tonga ny taom-pianarana vaovao…..
Maria est une petite fille qui n’a pas eu une enfance comme celle des autres enfants. Elle n’a pas vécu avec ses parents, car elle a dû faire ses études dans la capitale. Pendant les vacances, elle rentre chez ses parents avec sa soeur à Alaotra, le grenier à riz de Madagascar…
Commande du livre:Maria vakansy any Alaotra